China Dhijitari Kamera Kesi Mugadziri uye Mutengesi | DOWODA
chigadzirwa zita Aluminium alloy digital kamera kesi chigadzirwa mhando Dhijitari chikamu
CNC hwokugaya hwakabvira muchina inonziwo cnc azvikuya muchina, uye ayo makuru zvinhu zviri:
1.Parts inonyanya kuchinjika uye inochinjika, uye inogona kugadzirisa zvikamu zvine zvakanyanya kuomarara mamakisi maumbirwo kana kunetsa kudzora saizi, senge zvikamu zveforoma, zvikamu zvegobvu, nezvimwe.
Inogona kugadzirisa zvikamu zvisingakwanise kugadziriswa neyakajairika maturusi maturusi kana kuomarara kuita, senge dzakaomarara zvikamu zvakakombama zvinotsanangurwa nesvomhu mamodheru uye 3D nzvimbo yakakombama zvikamu;
3.Inogona kugadzirisa akawanda I-akateedzana zvikamu mushure mekukochekera nekumira;
4. Yakakwira yekugadzirisa chaiyo, yakatsiga uye yakavimbika yekugadzirisa mhando, iyo pulse yakaenzana nenhamba yekudzora chishandiso inowanzo kuve 0.001mm, uye yakakwira-chaiyo manhamba ekudzora system inogona kusvika 0.1μm.
Uye zvakare, CNC machining zvakare inodzivirira yeanoshanda zvikanganiso;
5. Dhigirii yepamusoro yekugadzira otomatiki inogona kudzikisira kusimba kwevashandi kweanoshanda. Zvinoita kugadzirwa manejimendi michina;
6. Kugadzirwa kwepamusoro kugadzira, CNC yekugaya michina kazhinji haidi kushandisa michina yekushandisa yakadai semagadzirirwo akasarudzika, uye inongodaidza mapurogiramu ekugadzirisa, ekumanikidza maturusi nedata rezvishandiso rakachengetwa muCCC mudziyo paunenge uchichinja mashopu, ayo anoderedza zvakanyanya kugadzirwa. . kutenderera. The CNC azvikuya muchina ane mashandiro anoita azvikuya muchina, munhu hakunakidzi muchina, uye kuchera muchina, izvo zvinoita muitiro zvikuru pfungwa uye anovandudza zvikuru kugadzirwa kunyatsoshanda. Uye zvakare, iyo yekumhanyisa yekumhanyisa uye yekumhanyisa kumhanya kweiyo CNC yekugaya muchina inotsika musiyano, saka zvinobatsira kusarudza yakanyanya kunaka kucheka huwandu;
Saka maitiro ekuverenga kumhanyisa kumhanya kweyekupedzisira chigayo panguva yekugadzirisa michina yeCCC yekugaya muchina? Hongweisheng Precision Technology ichagovana newe:
1. Sarudza nharaunda ye drill. Unogona kuita izvi neimwe yenzira mbiri. Kutanga, unogona kuyera hupamhi hwechigayo uye wozopatsanura ne2 kuti uwane nharaunda. Semuenzaniso, kupatsanura 5 mm nemaviri _. Inogadzira nharaunda yemaviri nepakati peni mamita. Kana, putira iyo tepi chiyero chakatenderedza-mapoinzi kuti utore mukombero wobva wapatsanurwa nemari
Pa2x PI (3.14). Semuenzaniso, kana iwo akakomberedza ari 12.56 mamirimita, nharaunda iri mamirimita maviri.
2. Yuniti yeiyo yakasarudzika angular velocity ndiyo Hertz yekupedzisira mill. Kana iwe uine angular velocity RPM, wozokamura ne60 kuti uwane Hertz. Semuenzaniso, 600RPM iri 10 Hz.
Pashure: Aluminium chiwanikwa exchanger
Zvadaro: Aluminium chiwanikwa kutaurirana michina
Aluminum ruoko kumumvuri muenzaniso proofing cnc proc ...
Girazi rakakwenenzverwa remberi electroplated yakajeka P ...
Chishandiso chesimbi isina simbi accessories
Aluminium chassis pani
Cnc Machining Center Kugadziriswa, Cnc Ruoko Bhodhi Kugadziriswa, Machina Zvishandiso Shell, Cnc Precision Zvikamu Kugadziriswa, Cnc Stainless Simbi Kugadzira, 5 Sekaiichi CNC Lathe,